Ukuheha Okuyingozi Kokugwema Ingosi Yezokuxhumana | Martech Zone
Ukuheha Okuyingozi Kokugwema Iwebhusayithi Yezenhlalo
NgoLwesihlanu, Novemba 26, 2010 NgoMgqibelo, Septhemba 26, 2015 Douglas Karr
Bengicabanga ukuqamba le posi, Kungani uJonathan Salem Baskin Akulungile… Kodwa ngiyavumelana naye ngamaphuzu amaningi kokuthunyelwe kwakhe, Ukuheha Okuyingozi Kwewebhu Yezenhlalo. Ngiyavuma, ngokwesibonelo, ukuthi ama-media media gurus avame ukuzama ukuphoqa amabhizinisi ukuthi asebenzise abezindaba ngaphandle kokuqonda ngokuphelele isiko noma izinsizakusebenza enkampanini abasebenza nayo. Akufanele kusimangaze, noma kunjalo. Bazama ukuthengisa umkhiqizo… ukubonisana kwabo!
Angivumelani UMnu Baskin ngamaphuzu ambalwa, noma kunjalo:
Amagama ukuheha okuyingozi kuvusa isithombe esesabekayo sewebhu yokuqothula inkampani. Iqiniso ukuthi, ngaphandle kokuthi usebenzela inkampani ngaphansi kwezimo ezinzima zokulawula, ukukhuluma nokulalela amakhasimende akho akuyona into embi njengoba kuzwakala. Eqinisweni, kulindeleke kakhulu futhi kwaziswe. Uma umncintiswano wakho utholakala kumanethiwekhi ongekho kuwo… imiphumela can konakalisa. Izinkampani ezinezinsizakusebenza nezinqubo ezikhona zokuphatha idumela lazo online futhi zisingathe ukuxhumana zithole iwebhu yezenhlalo ukuthi isebenza kahle futhi isebenza kahle kuyo yonke into kusuka ezindabeni zokuhlinzekwa kwamakhasimende kuya ekuphathweni kokwakha embonini yabo.
The iwebhu yomphakathi ishintshe konke… Ngaphezu kwabakhangisi abangathanda ukuvuma. Ukusho ukuthi bekungeke kufane nokuthi izinyunyana azibanga nomthelela ekuguqulweni kwezimboni. Ngemuva kwakho konke, izintambo zokukhiqiza, imikhiqizo, abaphathi nomsebenzi bekusekhona, akunjalo? Kulungile… kepha izinyunyana zinikeze abasebenzi amandla okuba nomthelela ekuphatheni nasekukhokheni. Izinyunyana zabasebenzi zingenza noma zibhidlize inkampani… futhi zinayo. Lokhu kulingana newebhu yezenhlalo. Izinkampani sezivele zeqa umncintiswano wazo ngokusebenzisa imikhuba yenhlalo; abanye basalela emuva. Ukusho ngenye indlela akunandaba.
UMnu Baskin uthi:
Abantu bebelokhu beba nezingxoxo ngemikhiqizo. Ngaphambi kwe-inthanethi, bekukhona imiphakathi yejografi, ubungcweti, ezemfundo, ezenkolo kanye nenqwaba yamaqembu ezenhlalo okungenzeka ukuthi abanzi kakhulu futhi akhanya kunalawo atholakala ku-inthanethi, kepha kunalokho ajulile futhi asekela. Imisebenzi yabo yayenziwe ngezandla ngokoqobo futhi imiphumela yabo ichaza indlela yokuphila. Ukuziphatha komphakathi akwehlukile kubuchwepheshe; ukuthi nje sinokubonakala okuyingxenye ezicini ezithile zokuthi abantu baxoxa kanjani manje, ngakho-ke sifuna ukukhuthaza noma ukubamba iqhaza kuleyo misebenzi.
Yebo, lokhu kuyiqiniso… kepha inkinga ukuthi lezi zingxoxo manje seziba yingxenye irekhodi lomphakathi. Zingabhalwa, zihlelwe futhi zitholakale enjini yokusesha ngemizuzwana nje. Futhi uquqaba lubhekisisa kakhulu imibono engalungile nokubuyekezwa okutholwa yinkampani. Ulayini ophuthelwe ekusingatheni udaba lwamakhasimende kulezi zinsuku ungaba nomthelela omkhulu kusithunzi senkampani lapho singakaze senze khona ngaphambili.
Abakhangisi abasavunyelwe ukucasha ngemuva kwelogo, isiqubulo, nejingle kanokusho… abathengisi baphoqeleka ukuxhumana ngqo noquqaba. Besijwayele ukukhuluma… manje kumele silalele futhi siphendule. Ayikho impendulo kulo mbuso wezenhlalo ofana nokungawakhathaleli amakhasimende akho. Abakhangisi abakakulungelanga kahle lokhu… futhi bayaqhubeka nokufunda ukuphathwa kokuphikiswa, ukuxhumana nabantu, namanye amakhono angaphezulu kwemfundo yabo kanye nesipiliyoni.
Umthelela kumabhizinisi ungokoqobo. Izinkampani zifunana nezinsizakusebenza ukumboza umzamo odingekayo wokuqapha nokuphendula kuwebhu yezenhlalo. Lolu olunye udaba olulahlekile nge izinkundla zokuxhumana. Babukela phansi izinsizakusebenza ezidingekayo ukushicilela okwanele, baphendule ngokushesha ngokwanele, futhi bathuthukise izinqubo ezidingekayo zokusebenzisa ngokugcwele iwebhu yezenhlalo.
Ngakho-ke, ngenkathi ngivuma i- i-gurus yenza umsebenzi ompofu nabaphathi ekubalungiseleleni iwebhu yezenhlalo, ngikholwa ukuthi ukugwema iwebhu yezenhlalo kuyingozi kakhulu.
Tags: ujonathan salem baskinibhizinisi lezokuxhumanazokuxhumana amangaiwebhu yomphakathi
Imiphumela Yocwaningo Lwamabhizinisi Amancane ye-Facebook
Izeluleko ezi-5 Zokukhulisa Ibhizinisi Lakho ngeselula